China 50A 600V Andersons ပါဝါ Connector Adapter Cable ကိုစက်ရုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ | ထင်း
ဝင်ရိုးစွန်း: 1P, 2P, 3P
လက်ရှိအဆင့်: 40A, 50A, 120A, 175A, 350A
OEM တောင်းဆိုမှု - လက်ခံသည်
Anderson ပါဝါ connector ကိုလုံခြုံမှုကိုထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဆက်သွယ်ရေး၊ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး PV စနစ်များ၊ စွမ်းအင်သုံးကိရိယာများ၊ UPS စနစ်များ၊ လျှပ်စစ်ယာဉ်များ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာ AC / DC ပါဝါစသည်တို့တွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ Anderson အား MC4 ကဲ့သို့သောလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်များမှပြုလုပ်သောအမျိုးအစားများစွာရှိသည်။ Connector, Anderson မှ Ring terminal၊ Anderson မှ Alligator ကလစ်၊ Anderson မှစီးကရက်မီးစက်နှင့်အခြားသော OEM power wires ။
2P Anderson Connector ၏နည်းပညာဆိုင်ရာဒေတာ
ပုံစံအမည် SG40 SG50 စင်ကာပူ စင်ကာပူ SG350
လက်ရှိအဆင့်သတ်မှတ်ချက် 40A 50A 120A 175A 350A
ဝါယာကြိုးအရွယ်အစား 10-20AWG 6-12AWG 2-6AWG 1 / 0-6AWG 1 / 0-3 / 0AWG
OEM Anderson Power connector ကြိုးများ
၁။ MC4 Connector Cable သို့ Anderson Power Connector
Tinned Bare Cable သို့ 2. Anderson Connector
4. 50A Anderson က Connector 1to2 Output Splitter ကို
SAE plug ကိုမှ 5. ဘက်ထရီ connector ကို
၆။ 50A Anderson သည် DC5521 Plug သို့ (Blade Fuse 15A ဖြင့်) ချိတ်ဆက်ပါ။
၇။ Cigaretter Lighter Male မှ 1P Anderson Connector
ရှေ့သို့ 4to1 MC4 Y Branch Connector Solar Panel Parallel Connection
နောက်တစ်ခု: အဝါရောင်အစိမ်းရောင်ဝါယာကြိုး 4mm 6mm Copper Solar Grounding Earth Cable
175A Anderson ကဝါယာကြိုး
350A Anderson ကဝါယာကြိုး
50A Anderson ကဝါယာကြိုး
Anderson connector ကိုဝါယာကြိုး